अाेलीले नगरेकाे काम देउवाले गरे, ३८ वर्षपछि छिन्ताङमा मारिएकाहरू सहिद घाेषणा, – Nepal Journal
अाेलीले नगरेकाे काम देउवाले गरे, ३८ वर्षपछि छिन्ताङमा मारिएकाहरू सहिद घाेषणा,
Posted By: Nepal Journal January 12, 2018 | २८ पुष २०७४, शुक्रबार १३:३४
काठमाडाैं । कांग्रेस नेतृत्वकाे वर्तमान सरकार जबर्जस्ती समय लम्व्याइरहेकाे छ भन्ने अाराेप एमालेले लगार्इरहेकाे छ । तर विवादित यहि सरकारले एमालेलार्इ चक्मा दिँदै गजबकाे निर्णय गरेकाे छ । एमालेबाट ४ जना नेता प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि गर्न नसकेकाे निर्णय देउवा सरकारले गरेकाे छ । २०३६ सालमा कात्तिक २७ गते धनकुटाकाे छिन्ताङमा मारिएका तत्कालिन माले निकट कार्यकर्ताहरूलार्इ याे सरकारले सहिद घाेषणा गरेकाे छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले साे घटना घटाएकाे भन्ने एमाले अहिलेसम्म भन्न छाेडेकाे छैन ।
संयाेगले तिनै थापाका पुत्र सुनील थापा याे निर्णय गर्ने क्याबिनेटका सदस्य छन् । एमालेले अरू बेला बिर्सेपनि चुनावकाे बेलामा भने याे बिषय सधैं उठाइरहन्छ । याे घटना एमालेका लागि धनकुटामा चुनाव जित्ने गतिलाे मसला हुने गरेकाे छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेबाटै पराजित मन्त्रि थापाले एमालेकाे मुख सधैंकाे लागि बन्द गरिदिन मन्त्रिपरिषदमा याे प्रस्ताव लगेका हुनसक्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एमालेकाे लगातारकाे खाेइराे खनार्इबाट थाेरै बँच्न याे निर्णयलार्इ सदर गरेकाे हुन सक्छन् । सहिद घाेषणाकाे निर्णय जसरी अाएपनि धेरै समय राज्य संचालनकाे बागडाेर सम्हालेकाे एमालेलार्इ झस्का दिएकाे छ । भाेली एमालेका नेताहरूले कस्ताे प्रतिक्रिया देलान् त्याे हेर्न बाँकी छ । सायद उनीहरूले कांग्रेस सरकारले सस्ताे लाेकप्रियताका लागि हामीले गर्न ठिक्क पारेकाे काम गरेकाे अाराेप लगाउन सक्छन् ।
छिन्ताङ काण्ड के हाे ?
०३६ सालको कात्तिक २७ गते धनकुटाको खोकु छिन्ताङ गाउँमा एक सांस्कृतिक कार्यक्रमका बीच राज्यले गोली चलाएर १६ जनाको हत्या गरेको थियो । तत्कालीन भूमिगत नेकपा मालेको कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गोली चलेको र सुत्केरीसहित १६ जना मारिएको आरोप लाग्ने गरेकाे छ । छिन्ताङ काण्ड आजपर्यन्त नेपाली राजनीतिमा ठूलो घटनाका रुपमा लिइने गरिन्छ ।
सरकारकाे निर्णयप्रति मालेका तत्कालिन नेता राधाकृष्ण मैनालीले भने, ‘याे काम गणतन्त्र अाउने बित्तिकै गर्नुपर्थ्याे । किन गरिएन एमाले जान्दछ । तर ढिलै भएपनि याे सरकारले सहि निर्णय गर्याे । राजा छउन्जेल बहुदलमा चाहेर पनि
छिन्ताङमा ज्यान गुमाएकाहरूलार्इ सहिद घाेषणा गर्न सकिएन । ‘
त्यसैगरी माअाेवादी नेता हेमराज भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्ः–
2036 साल कार्तिक मा तत्कालीन पंचायती शाशकहरूले किसानहरूका समस्या ऊठाऊदै तत्कालीन माले को नेतृत्वमा भएको किसान आन्दोलन लाई क्रुरतापूर्वक दमन गरी हत्या गरिएका धनकुटाको”छिन्ताड़ हत्याकांड”का शहिदहरूलाई राष्ट्रीय शहीद घोषणा गराऊने लामो समय देखीको प्रयास साकार भएको छ ।तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएको वेला क.नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राष्ट्रीय शहिद सिफारिश गर्न एक ऊच्चस्तरीय आयोग निर्माण भएको थियो। बल्ल आज सरकारले छिन्ताड़का शहीदहरूलाई राष्ट्रीय शहीद घोषणा गरेको छ। छिन्ताड़का शहीद परिवार र हामी सबै धनकुटेलीहरू लाई बधाई !!! सरकारलाई पनि सबै धनकुटावासीको तर्फवाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
पत्रपत्रिका, मुख्य खबर, समाचार
बाबुमाथि हत्याकाे आरोप, छोराले गरे सहिद घोषणाको प्रस्ताव
Be the first to comment on "अाेलीले नगरेकाे काम देउवाले गरे, ३८ वर्षपछि छिन्ताङमा मारिएकाहरू सहिद घाेषणा,"